Hezvino izvo vanhu vari kutaurwa nevanhu nezve chitubu chekurapa cheki | Rayson
Hezvino izvo vanhu vari kutaurwa nevanhu nezve chitubu chekurapa cheki
ALDCOth MS Wakawanda: , kambani yekuisa canadian inosimbisa nekambani yekuisa chigadzirwa
Nekuti zvidyarwa zviri kukura zviri kukura uye kusimba. Asi kunyange gadheni rakavakwa rinombopindwa nemasora. Pane nzira dzinoverengeka dzaungashandisa kuderedza iyi hossle. Matipi anotevera achabatsira kukupa iwe mupendero pamusoro pemasora uye kuita kuti bindu rako ritarise zvakanakisa. Kuyamwa zvishoma panguva, asi kuyamwa kashoma.
Star Player: Nicklas Henius, 22, 22year-iyo Strker yekare inokodzera kuve danho rakakura. Iyo yekupedzisira Danish mutambi wegore rakarukwa 1 pound. Mamirioni maviri pamwe nekuwedzera-pamusoro peiyo aive mugore rekupedzisira rechibvumirano. Makore makumi maviri-ekuzvarwa Danish International Okor aramba $ 5 mamirioni anofamba kuenda kuKolsea nekuti ari kuda mutambi wenguva dzose --Team chiito.